China Ọkara Excavator ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | Bonovo
N'ihe zuru oke
Werụ Ọrụ Ibu
140 / 2050r / nkeji
Max Igwu Ala Omimi
5.4 / 3.1 km / awa
Max Igwu Ala elu
Max Igwu Ala okirikiri
Original DOOSAN Ika
Brand Shantui nke mbụ
Wụ Igwu Ala ike
• Akwa-arụmọrụ •Nchekwa Ike • Pro-Environment
QSB7 Engine, China Stage III & Euro III Emissions Dabara. Ike Dị Ike, Durable, Low Fuel Oriri, Higher pụrụ ịdabere na arụmọrụ.
Nnukwu Mwepụ & Nnukwu Mmetụta Hydraulic System
Nnukwu mbugharị na mgbapụta dị elu, ọganihu / nkwụghachi mmụba, ọsọ ọsọ na-agagharị, site na mgbapụta kachasị mma na nha ọkụ ọkụ. itinye n'ọrụ nke igwe iji meziwanye arụmọrụ ọrụ ya.
Olee otú iji chebe gị excavator si ezighị ezi mmebi?
Gị excavator bụ isi ego. Ya mere chedo ya dika o di. Dị njikere na gị excavator nwere ụfọdụ ụdị mgbochi-ezu ohi usoro ma ọ bụ nkà na ụzụ. Ihe ikpeazu ichoro bu na i ghaghi inwe mpempe ngwa oru nke ichoro mgbe nile. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji zere mmebi.
Nlụpụta, usoro nnwale na ngwa
Nnukwu Akụkụ na Mgbakwunye
Mgbe ụfọdụ na ikike gị, ịnwere ike ịzụta ụfọdụ akụkụ ndochi. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ijide n'aka na ị nwere ohere dị mfe na akụkụ ndị mejupụtara igwe gị.
Ozugbo ị họọrọ onye na-egwupụta akụ na-amasị gị, lee anya ka ị hụ ma a ga-azụta akụkụ ndị ọzọ na mpaghara gị. Ọ bụ ezie na ekwesighi ịchọta ha na mpaghara gị, ịnwe ha nso ga-enyere gị aka idozi nsogbu ọsọ ọsọ. Ma ọ bụghị ya, ị ga-echere ka akụkụ gafere maka gị.
Gbaa mbọ hụ na mgbakwunye dị nso nso. N'ụzọ ahụ, mgbe ịchọrọ ha, ọ ga-adị mfe ịnweta ha. Lelee ịhụ ma enwere nhọrọ mgbazinye, kwa, ọ bụrụ na ị ga - eji ụfọdụ mgbakwunye ụfọdụ oge ụfọdụ.
BONOVO Mgbakwụnye ụlọ ọrụ nwere ike na-enye gị nnukwu iche iche nke Mgbakwụnye maka gị excavator, ị dị nnọọ mkpa banyere nile di iche iche nke o kwere omume na-arụ ọrụ na ọnọdụ ị nwere ike na-eche ihu, anyị ahịa ga-enye gị onye-nkwụsị ịzụta ngwọta ozugbo.
BONOVO Undercarriage ụlọ ọrụ dị njikere oge niile iji nye gị akụkụ dị mma maka igwe gị niile gụnyere ndị na-egwupụta ihe, bulldozers, min diggers, skid steer loaders na wdg.
Nke gara aga: Ihe Ngwuputa Amphibious
Osote: Mini Excavator 1 Ton - ME10
20 tọn excavator
21 tọn excavator
pusi ajụ excavator
ọnụ ala excavator
excavator nke China
ọkara excavator maka ọrịre
ọkara size excavator